Ciidamada Xooga dalka Somaliya oo howlgalo ka wada deegaanada Maamulka Galmudug. – Kismaayo24 News Agency
Ciidamada Xooga dalka Somaliya oo howlgalo ka wada deegaanada Maamulka Galmudug.
by admin 8th January 2020 0131
Cutubyo ka tirsan Guutada 13-aad ee qaybta 21-aad iyo Ciidamada NISA qaybtooda ka howlgasha Galmudug ayaa gaaray deegaanada Galqoryaale ,barujeed , ceelbaxaay iyo golagole oo dhowaan lagu arkay Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Saraakiisha Ciidamada hoggaamineysa ayaa waxaa ay sheegen inay xaqiijiyeen gacan Ku heynta deegaanadaasi, iyaga oo dadka Shacabka ah u sheegay in uu soo dhomaadey waqtigii laga cabsan lahaa Al-Shabaab.
Taliyaya Guutada 13-aad GaashaanleCabdiraxmaan Macalin Maxamuud “Timadheere” ayaa sheegey in ciidamada qalabka sida ay diyaar u yihiin inay Al-Shabaab ka saaraan deegaannada ay kaga sugan yihiin Galmudug.
Si kastaba shalay ayay aheyd markii Ciidamo ka tirsan kuwa Hay’adda Nabadsugida Soomaaliya ee ka howlgasha deegaannada Galmudug ay howlgallo ka sameeyeen deegaano duleedka ka ah degmada Guriceel.
Masuuliyiin dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka koofur Galbeed oo digniin udiray.
Dhageyso: Waxbadan ka ogoow sababta uu wasiir hadliye u joogo dalka mareykanka iyo waxa uu halkaas kaga…..
Tifaftiraha K24 22nd March 2017
XOG RASMI AH: Xildhibaanadii ugu badnaa oo ka baxay Garabka Xasan Sheekh iyo Shariif Xasan oo…
admin 16th January 2017